[mm]jrefrmawGbmaMumifh EdkifiHom;udk pGefYvTwf&wmvJ[/mm]
08-02-2011 07:15 AM
jrefrmawGbmaMumifhedKifiHom;udkpGefhvTwf&wmvJ ... aqG;aEG;Muyg/
bwdk;wdk holi,fcsif;awGrMumrMumqHkavh&Sdygw,f/ om;orD;arG;ae h'grr[kwf bkef;MuD;qGrf;ausG; ponfjzifhhaygh/ wcgqHkwdkif; oli,fcsif;wcsdK hjrefrmedKifiHom;r[kwfawmhbl;/ pGef hvTwfvdkufjyefjyD/ aemufwcgxyfqHkw,f ygoGm;jyefjyDaemufrdom;pkwpk/ bwdk;eJ hMuhHMuhHcHoli,fcsif;enf;enf;yJ usefawmhw,f/ bwdk;u'grsdK;us odyf0goemygawmhpyfpkwmaygh/bmaMumifh pGef hvTwf&wmvJaygh/csHKMunfhvdkufawmh'Dvdkaygh/
1) oH&kkH;eJ hrqufqHcsifawmhvdk heJh tcGefraqmifcsifawmhvdk h
2) tdrftopf0,fcsifvdk h (pvHk;rSmedKifiHom;qdk&iftdrftopf0,fvdk h&jyD; tpdk;&u pvHk;a': vm 3aomif; pdkufay;ygw,f )
3) om;orD;awG&J ha&S ha&;eJ hynma&;p&dwfaps;MuD;vGef;vdk h ( edKifiHom;eJh
PR cHpm;rSK hawmfawmfav;uGmaeygjyD )
4) jrefrmjynfrSm aqGrsdK;om;csif;r&Sdawmhvdk h (tukefvHk;edKifiHjcm;rSm )
5) tvkyfudpÆaMumifhc&D;cPcP oGm;&&if jrefrmywfpfydk huawmfawmf
6) tajctaet&jrefrmjynfjyefr&awmhvdk h
ponfjzifhayghav/ wjcm;edKifiHom;jzpfoGm;MuolawG'keJha';yg/ pvHk;rSm
vpmrsm;wJholawG? ynmt&rf;wwfwJholawG? jrefrmawGvdk hMunfhvdkuf &iftukef pvHk;awGjzpfukefMujyD/ Primary eJ hSecondary ausmif;awG GrSmpmawmfwJhjrefrmuav;av;awG Munfhvdkuf&if pvHk;awGyJ/ &ifemp&m
usK;ypfrifbmawGaqG;aEG;Muyg/ bmaMumifhvJqdkwm&ifzGifhMuyg/ 'grSvnf; 'Do&ufudkjrefrmtmPmydkifawG0ifzwf&if usGefawmfwdk hjrefrm
vlrsdK;awG rsdK;rcspfvdkh tm;wdkif;,m;wdkif; edKifiHom;pGef hvTwfaewmr[kwf
bl;qdkwm 'if;wdk hod&ifauseyfygjyD/ olwdk hawGajymif;vJoifh&ifajymif;vJ
(usGefawmf jrefrmedKifiHom;tjzpf&Sdaeygao;w,fcifrsm; )
08-02-2011 08:01 AM
udkbwdk;ajymwJh tajctaeawGaMumifh EdkifiHom; ajymif;vdkufwJholawG&Sdovdk olrsm;a,mifvdkU vdkufa,mif tarmifawmifrSef; ajrmufrSef;rod qdkwJh olawGvJ awGUzl;oAs...
wpfcg pvHk;a&mufcgp oli,fcsif;u tultnDawmif;wm olUwynfhav; pvHk;tvkyfvm&SmcsifvkdU tJ'g 'DrSm olUtpfrawmh&Sdw,f... tJ'D olUtpfru b,fvdk ADZm avQmufay;&rSef;rodvdkU ulygOD;wJh... olUtpfru yDtmvm; qdkawmh r[kwfbl; pvHk; pDwDZifjzpfaeyDwJh... [if pvHk;awmifjzpfaeNyD udk,fharmifudk b,fvdk ADZmavQmufay;&rSef; rodbl;vm;[ qdkawmh at;[kwfw,f olUarmifav;twGufqdk ighvmar;aevdkUwJhav... tJvdk vlawGusawmh bmajym&rSef;udk rodygbl;...
pum;rpyf 'Dvydkif; tenf;i,ftwGif;rSmudk jrefrmrdef;uav; awmfawmfrsm;rsm; EdkifiHjcm;om;eJU vufxyfwmawG awGUawGUvmw,f... wpfcsdKUvJ orD;&nfpm;tqifhyJxifygh... awGU&wmawGu txl;ojzifh azhbGwfrSmaygh... wpfcsdKUvJ pvHk;eJU wpfcsdKUvJ tjzLawGeJUaygh...
wpfaeUu oli,fcsif;wpfa,mufuajymw,f... igwdkU ausmif;u b,folUodvm;aygh... rodbl; bmvdkUvJqdkawmh tJ'Daumif MoZDr wpfa,mufeJU ,lvkdufNyD; ckMoZDyDtmawmif jzpfaeyDwJh... tJvdk udk,fhb0 twGuf avSum;xpfoabmrsdK;eJU wpfjcm;EdkifiHjcm;om; cHwJholawGa&m b,favmufrsm;aeyDvJ... tJ'Dwpfcsufu udkbwdk;ajymwJh6csufxJ rygao;wJh wpfcsufayghav...
08-02-2011 08:09 AM
udkbwdk;Nyxm;wJh eHygwfpOf awGxJu usaemh MuHKzl;?MuHKae&pJ uawmh trSwfpOf 1 eJY5yg/usefwmawGu rMuHK&ao;bl;/ 'gayr,hf usaemfawmh NrefrmekdifiHom;NzpfaepJygyJ/ trSwfpOf 1 rSmawmif tcGefaqmif ae&wmu ekdifiHNcm;rSm tvkyfvkyfaeolwkdif; aqmifae&wmrdkYvkdY aNzr,fqkdaNzekdifygao;w,f..'gayr,fh taMumif;&SdvkdY NrefrmoH&Hk;eJY qufqH&wkdif; tqifracsmrSK? pdwfxJrSm tpmraMuNzpfNyD; 1 ckckuawmh usefcJhwmcsnf;ygyJ/ NrefrmoH&Hk;0efxrf;awG wm0efodwwfNyD;? NynfolY0efxrf;qkdwm bmvJ...wm0ef eJY vkyfydkifcGifhqkdwm bmvJqkdwmawGudkt"dyÜg,f&Sd&Sdodem;vnfNyD; tJ'Dtwdkif;vnf; vkdufemusifhMuHMurS aNyvnfr,fvdkYxifygw,f/ trSwfpOf5uawmh ,ckaewJh ekdifiHuae wNcm;edkifiHwckckudk tvkyfeJYyJoGm;oGm;? tvnfyJoGm;oGm;...tenf;eJY trsm; NrefrmywfpydkUpfaMumifh atmifhoD;atmufoufav;awGuawmh MuHKzl;ygw,f/ tdrfeD;csif;aygufazmfekdifiHu avqdyft0ifawGrSm MYANMAR qkd b,fem;uekdifiHvJ..qkdwmrsdK; tar;cH&wmrsdK;? ekdifiHtrnfbmvJ...wJh 1 cgar;cH&zl;ao;...(pmtkyfrSmygw,fav..zwfMunfhaygh.. vdkYNyefaNymvkdufw,f...) ar;oludkMunfhvkdufawmh ycHk;rSm tyGifh2yGifheJY?NrefrmNynfvdkqkd&if t&mxrf;tqifhrsdK;? aemufNyD; ab;em;vkyfazmfudkifzufawGudkNyNyD;...'Dywfpydkpfh eJY 'D edkifiHudkyJ ab;em; uvlawGuvnf; txl;tqef;vdk? tNypf&SmwmvkdrsdK; zifNyefacgif;NyefvSefMunfhaeMuwmrsdK;awG? olwkdYu tJvkdawGvkyfaeawmh Immegration NzwfzdkY udk,faemufu wef;pDaeol c&D;onfawGuyg..ywfpydkpfhydkif&Sifudk uGufMunfhuGufMunfhNzpfukefa&m/v0u uNrefrmywfpydkpfhudk txl;tqef;Nzpfwm..txGufrSmvnf; 1 cgMuHKzl;ao;.... 'gawGu tao;tzJGxm;vkdufOD;/ udk,fhtvkyfxJuwNcm;ekdifiHuolawG?'DekdkifiHom;awGe JY tvkyftwGuf ekdifiHNcm;c&D; oGm;zdkY ADZmaygif;avsmufMu&if...udk,fhADZmu aemufusrSm &wmrsdK;/oGm;cgeD;rS uyf&wmrsdK;? (usaemfawmh rMuHKzl;ao;ayr,fh todwcsdKYqkd ADZmr&wmrsdK;? ydkqdk;wmu tod 1 a,mufqkd ADZmawmh&w,f... c&D;pOf pwJY &ufudk ausmfNyD;rSay;vdkufwmrsdK; ....wNcm;olawGuoGm;ukefNyD)b,favmufatmifhvkdufrvJ/ 'gawGu usaemf ekdifiHNcm;rSm aewJh3ESpfavmuftwGif;rSmMuHK&avmufoav;/ ESpf 10 csDaeNyD; tvkyfvkyfaeMuolawG twGufqdk&ifawmh...'gxufru atmifhwmawG rsm;awmhraygh..... tJvkdawGMuHK&av?udkbwkd;Nyxm;wJh wNcm;trSwfpOfawGrSmyg cHpm;ae& rSKav;awG&SdNyD; ekdifiHom;aNymif;zkdYvnf; vHkavmufwJh aemufcH&Sdolqkd&if.. Nrefrmywfpydkpfhav;udkpGefUNyD; ekdifiHom; aNymif;vJcH,lzdkYtwGuf vkyfrdMuvdrfhr,f/
08-02-2011 09:34 AM
udkbwdk;eJU oufqdkif&mawmhypftkyfcsKyfolrsm;udk awmif;qkdcsifwmwcku...
jrefrmawGbmaMumifhedKifiHom;udkpGefhvTwf&wmvJ ... aqG;aEG;Muyg/ qdkwJh awmhypfacgifpOftpm; bmaMumifhEdkifiHom;pGefUvTwf&wmvJ (odkU) bmaMumifh rpGefUvTwfjzpfwmvJ qdkwmav;yg xnfhay;&if ydkjyD;aumif;r,fxifvdkU tMuHay;wmyg/
oabmuawmh 'DawmhypfrSm EdkifiHom;pGefUvTwfcsifwJholeJU pGefUvTwfoGm;wJholu vltenf;pkjzpfwmaMumifh aqG;aEG;rSK tcdkuftwefUav;eJU jyD;oGm;r,fxifw,fav/ 'Dzkd&rfrSm EdkifiHjcm;a&mufaewm tenf;qHk; 4-5 ESpftxuf&SdolawGua&mEdkifiHom;rpGefUvTwfcsifyJ bmaMumifh udk,fwdkif;jynfjyefcsifwmvJqdkwmawGyg aqG;aEG;Mu&if pGefUvTwfvdkol rpGefUvGwfvdkol
tjyeftvSefaqG;aEG;rSKawGu ydkjyD; aumif;r,fxifvdkUyg/
uGsefawmfuawmh jynfya&mufaewm4ESpfyJ&Sdaeao;vdkUvm;rodbl;/ jyefcsifwmyJ odw,f/ [D;;;;
08-03-2011 09:57 AM
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလဲ မရေးချင် မရေးပဲလဲနေချင်လို့ ရေးလိုက်ပါတယ်..
ကိုဘတိုးရေးထားတာ မဟားဒယားကို ထောက်ခံပါတယ်..
အဆိုးရွားဆုံးက အခွန်သာေ မဟားဒယား ဆာင်ရတယ်.. နိုင်ငံခြားမှာ ကိုယ် အဆင်မပြေရင် လှည့်ကြည့်မယ် ထင်ပါသလား.. ဝေးပါသေးတယ်.. မတော်လို့ မသာပေါ်ရင်တောင်မှ အဖတ်မလုပ်ပါဘူး ..
နိုင်ငံတကာက မြန်မာသံရုံးဆိုတာ အခွန်ကောက်ဖို့ ပဲထားတယ်တူပါရဲ့ ..
အခွန်သာဆောင်ပြီး အကျိုးလည်းမရှိ .. စာအုပ်နီကြီးနဲ့ သွားလေရာလဲ မျက်နှာငယ်သေးရဲ့ 
ဘယ်သူက သီးခံနိုင်တော့မလဲ :|
udkbwdk; ajymxm;wmawG tm;vHk;udk axmufcHygw,f/ tjrifuawmh wpfa,mufeJY wpfa,muf rwlEdkifbl;aygh/
uGsefawmh ywf0ef;usifrSm awGYzl;wJh olawGudkvnf; ar;Munfhjzpfygw,f/ awmfawmfrsm;rsm;uawmh oH&kH; eJY rqufqH csifMuwm rsm;ygw,f/ uGsefawmfMuHKzl;wmawGuawmh -
1/ tcGefoGm;aqmifw,f ay;csifatmif rajymbl;/rawmif;bl; taMuG;,lxm;rdvdkY rsufESmi,fav;eJY avajyxdk;NyD; acsmharmh vmay;&ovdkyJ/ ta[mufu cH&ao;/
2/ oH&kH;eJY qufqH&wdkif; wpfckr[kwf wpfck pdwfnpf&ygw,f/
3/ udk,fay;vdkufwJh tcGefudk b,fem;awG rSm bmawG oHk;vdkufrSef;awmif rodvdkuf&yJ aysmufaysmuf oGm;ygw,f/
4/ olrsm;EdkifiHoGm;vdkY pmtkyfteDawGYvdkY &pfcH&/oHo, rsufvHk;eJY tMunfhcH&wmudk rajymawmhygbl; udk,fhEdkifiHudk jyefvmygw,f EdkifiHjcm;om;u jrefjrefqefqef v0u udk jzwfvdkY &oavmuf udk,fhvlrsdK;udk wef;pDNyD; a&a&vnfvnf &pfygw,f/ olrsm;EkdifiHoGm;NyD; r[kwfwm vkyfNyD; jyefvm ovdktMunfhrsdK;eJY tMunfhcH&ygw,f/
(jrefrmjynfjyefNyD;vdkY pvHk;jyefa&muf&if udk,fudkifxm;wJh SPass/EP/PR u'fav; jyvdkufwmeJY azmfazmfa&Ga&G MudKygw,f tenf;qHk; welcome back vdkYajymygw,f/ uGsefawmf 'DvdkajymvdkY ta&;w,l ESKwfqufcHcsifwm r[kwfygbl;/ r&pf&if awmfygNyD)
5/ aoavmufatmif 'kwfc a&mufvnf; oH&kH;awGu rqdkifovdk aeygw,f/ (2008 avmufwkef;u rGefbdkif;rSm tMurf;zufwJh trSK jzpfygw,f/ aemufwpfaeYrSm ygvmwJh oli,fcsif;udk olYoH&kH;u csufcsif; tusdK;taMumif; ar;ygw,f/ olaq;&kHwuf&awmh aq;&kHtxd wul;wu vmNyD; vkdtyfwm tm;vHk;vkyfay;ygw,f/ jyefcsif&if csufcsif; jyefvdkY &atmif pDpOfay;ygw,f/ oleJY a&ma,mifNyD; uGsefawmfhudkvnf; tultnD ay;ygw,f/ uGsefawmf a,musmF;&ifhrMuD; jzpfvSsufeJY rsuf&nfvnfygw,f/)
avmavmq,ftxdawmh uGsefawmf[m jrefrmEdkifiHom;yg/
08-03-2011 07:49 PM
NrefrmoH&kH;uawmh b,fEkdifiHrSmNzpfNzpftwlwlygyJ/ ukd,f'ku©a&mufvkdYrsm;awmh oGm;NyD;tultnDawmif;r,f rpOf;pm;ygeJY/ vSnfhawmifBunfhrSmr[kwfygbl;/ awmfawmfrsm;rsm;oH&kH;awGrSm ADZmavQmufzl;ygw,f/ b,foH&kH;rqkd tGefvkdif;uae azmifawGbmawG tvum;xkwfvkdY&ygw,f/ NrefrmoH&kH;uawmh azmifutp a&mif;pm;ygw,f/ azmifqkdvkdY aumif;aumif;uef;uef;r[kwfygbl;/ &kd;&kd;Avmpm&Gufay:rSm Nzpfuwwfqef; &kdufxm;whJ cyfnhHnhHpm&Gufwpf&Gufukd 5aygifay;NyD;0,f&ygw,f/ tckawmh aps;usoGm;NyDvkdYaNymw,f/ t&ifwkef;u ywfpykdYpfaysmufvkdY topfNyefvkyf&if aygif800 ay;&ygw,f/ thJ'Daygif 800qkdwm thJwkef;u vlwpfa,muf tedrfhqkH; wpfem&D 5aygifavmuf &whJtcsdefavmufuyg/ wpfvcpm&Sdygw,f/ oli,fcsif;wpfa,muf ,lau homeoffice rSm visa extension wkd;awmh homeoffice uywfpykdYNyefykdYwhJtcsdef vrf;rSmaysmufoGm;ygw,f/ thJwmeJY [krf;atmhzpfu avQmfr,faygh b,favmufvJqkdawmh 800 qkdawmh olwkdYawmfawmfukd tHBooGm;ygw,f/ NyD;awmh thJavmufawmhravQmfEkdifbl;qkdvkdY aemufqkH;wpf0ufzkd;vm;yJ&w,f/ 'DrSm t*Fvdyfpmtkyfvkyfcu 15 aygif 20 avmufyJ&Sdwm 800qkdawmh olwkdYvJ rsufvkH;awGawmifNyL;NyD; t&rf;ukdtHawGBo vkdYygwhJ/
pmtkyfoufwef;u t&ifwkef;uqkd 2ESpfwpfcgyJwkd;ay;ygw,f/ wpfcgoGm;wkd;&if azmifwpfcg0,fNyD; Nznfh&ygw,f/ ykdufqHJ100 &may;&ygw,f/ 'gayr,fh NrefrmvlrsKd;awGtwGufawmh bmrSvkyfray;ygbl;/ &orQvnfyif;npfawmif;wmuvGJNyD; bmrStm;rukd;&whJ NrefrmoH&kH;yg/
08-03-2011 11:20 PM
usawmf jrefrmEdkifiHom;tjzpfu pGefYvTwfNyD; pvHk;EdkkifiHom; cH,lxm;wm3ESpfausmf avmuf&SdygNyD/ usawmf bmjzpfvdkY jrefrmEdkifiHom;tjzpfu pGefYvTwfzdkY qHk;jzwfcJhovJ qdkawmh
1/ jrefrmoH&Hk;eJY qufqH&wm pdwfysufvdkY
2/ pvHk; passport udk vdkcsifvdkY
3/ aemufxyf tESpf 30 avmufaerS jrefrmEdkifiHom;jyefavQmufNyD; jrefrmEdkifiHrSm jyefaezdkY qHk;jzwfxm;wJhtwGuf (jrefrmEdkifiHom; jyefavQmufr,fqdk&if tJ'd tESpf 30 twGuf tcGefjyefay;&r,fvdkY ajymygw,f)
[motaeeJYajym&&if usawmf pvHk;EdkifiHom; cH,lNyD; 1 v tMumrSm MoZDudkxGufvmcJhw,f .. aemufESpfus&if MoZDEdkifiHom;avQmufr,f .. tdkau&if pvHk;EdkifiHom;tjzpfu pGefYvTwfr,f ... :))
08-04-2011 05:03 AM
Originally Posted by palartoo
စိတ်ခံစားမှုတွေပါ ပါနေတော့မှာဘဲ... ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်..တအုံနွေးနွေးလို့ဆိုရမလား..
(ရနိုင်ခြေ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသေချာ၊ စဉ်းစားနေပါတယ်)
ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေစွန့်လွတ်ရသလဲမဖြေခင်..
အနော်က မြန်မာဆန်ချင်လွန်းရို့.. ရောက်လေရာမှာ. မြန်မာလိုပြော..တယ်...
လူအထင်သေးခံရတယ်... အိုင်အမ်မြန်မာလို့ပြောလိုက်တော့ dangerous people ရို့
အပြောခံရတာလဲရှိ။ ကွန်မြူနစ်တိုင်းပြည်ရို့ အပြောခံရတာလဲရှိခဲ့။
ကွန်ပြူတာစင်တာဆိုင်မှာ ၀န်ထမ်းအတော်များများက မြန်မာတွေပါ. ဆိုင်ရောက်ရင် သူတို့ကို မြန်မာလိုပြောပါတယ်..
သို့သော် အနော့်ကို မြန်မာလို လုံးဝ ပြန်မပြောပါ... ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆို... တရုတ်တယောက်က မြန်မာလို
မပိတပိပြောတဲ့စတိုင်... တရုတ်သံဝဲ၀ဲနဲ့ မြန်မာလို ပြန်ပြောပါတယ်..
သူ .. မြန်မာပါ.. (အားကို..တိ PC က လွေ.... ) စသဖြင့်ပေါ့။
အရောင်းမန်နေဂျာက တရုတ်စစ်စစ်။ အနော့်ကို မြန်မာလို ကြိုးစားပမ်းစား ရှင်းပြတယ်..
နောက်ပိုင်းမှ အဲဒီမြန်မာတွေ အနော့်ကို မြန်မာလိုပြောရှာပါတယ်..
အကို မြန်မာဖွန်းပါ ထဲ့မလားတဲ့... ဇော်ဂျီလားတဲ့.. အဲ့လို..အဲ့လိုသိတတ်လာတယ်..
ရှိနိုင်ပါတယ်.. မြန်မာလို့ပြောရမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲဆိုတာ...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာလို မပြောနိုင်တာတွေ၊ မြန်မာလို့မခံယူနိုင်တာတွေ။
နိုင်ငံတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရာမှာ.. အိုင်ဒီကဒ်တွေနဲ့ထုတ်ပေးပြီးစီမံခန့်ခွဲရတာကိုနားလည် ပါတယ်
သို့သော်.. လူသားတယောက်... ဤကမ္ဘာမှာ မည်သည့်နေရာမဆို အသက်ရှင်သန်. နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့..
မြန်မာနိုင်ငံသားကဒ်၊ မှတ်ပုံတင်ကိုင်ပြီး.. မြန်မာနိုင်ငံကောင်းကျိုး။
နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း.. အထောက်အထားထက်.. အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ မူဝါဒအတိုင်း
ကဒ်တွေ. အထောက်အထားတွေဆိုတာ.. စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ဟု.ထင်ပါတယ်.
တိုင်းတပါးနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပြီး အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေတွေလိုက်နာပြီး.. အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ မူဝါဒအတိုင်းလိုက်နာပြီး
မြန်မာနိုင်ငံအကျိူး. သယ်ပိုးသူတွေလဲ တပုံကြီးပါ..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်း
တဖက်တလမ်းက ကြိုးပမ်းတဲ့ တိုင်းတပါးသားတွေလဲ တပုံကြီးပါ.
နိုင်ငံတွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တွင်မဟုတ်ဘဲ.. လူသားတစ်ယောက်ကို လူသားအဖြစ်..
ဤလူသားတစ်ယောက်ကို ဤကမ္ဘာမှာ နေထိုင်ခွင့်မပေးဘဲ လပေါ်မှာ တကျွန်းစံအဖြစ် နယ်နင်နိုင်လို့လား။
လူသားတစ်ယောင်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ...
အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ...ဘယ်သူ့ကြောင့်လို့  အပြစ်မဆိုသာ..
ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်စွန့်ရလဲဆိုတာ အထူးမပြောလိုပါ..
သို့သော်.. အနော်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ပြန်လျှောက်ရင်..
အခုချိန်. ပြည်ပရောက်နေပြီ၊ မြန်မာမှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရခဲ့ပါ..
အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်း.. အင်.. အသက်တောင်ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးနေခဲ့ရတယ်..
မြန်မာလို့. ပြောရမှာကို မရှက်စေချင်ပါ..
နောက်.. အမှားကို ၀န်ခံရာမှာလဲ မကြောက်မရွံ့ ၀န်ခံစေချင်ပါတယ်..
အမှားကိုဝန်ခံရတဲ့သတ္တိ တွေ ရှိစေချင်ပါတယ်..
မင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ စည်းကမ်းမရှိလို့ ဘောလုံးပွဲပျက်ရတယ်..
အေ.. ဟုတ်တယ်.. အဲဒါ ငါတို့ မြန်မာပဲ..
ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံ. ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့။ တိုးတက်ဖို့ ငါတို့ အရမ်းကို ကြိုးပမ်းရအုံးမှာ..ဒီလိုမျိုးပေါ့..
အဒေါ်ကြီးတယောက်... ယူအက်နိုင်ငံသားခံယူဖို့ အဲနိုင်ငံကိုထွက်သွားတာနဲ့ စကားပြောဖူးတယ်..
သူ့သားက အဲဒီနိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီး.. သူပါ.အဲနိုင်ငံမှာနေပြီး ကြာရင် လိုက်လျှောက်မလို့တဲ့။
သူက. အနော့်ကိုပြောဖူးတယ်.. ငါ့သားရယ်..မင်းမြန်မာနိုင်ငံဘာပြန်လုပ်မှာလဲ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာမှ လုပ်စား၊ ကိုင်စားလို့မရဘူး....
အနော့်တို့နိုင်ငံသားတွေ.. လုပ်စားကိုင်စားလို့ရအောင်. အနော်ပြန်ကြိုးစားရမှာလေ..
အနော့်တို့လဲ လုပ်စားကိုင်စားလို့ရအောင် ကြိုးစားရမှာလေ..လို့ ပြန်ပြောမိပါတယ်..
(အဟီး.. အခုထက်ထိတော့ အမောင်. မပြန်နိုင်သေးပါ..ပြောသာ ပြောလိုက်တာပါ..)
ဆိုလိုတာက မည်သည့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူ၊ ခံယူ။ မြန်မာလို့ ပြောရမှာကို မရှက်ဖို့၊
မြန်မာအချို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုအထင်သေးတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်.
အနော်က မြန်မာကောင်းပါ.. ကောင်းတာတွေလုပ်ပြနိုင်ရမယ်..
အမှားတွေကိုဝန်ခံရဲတဲ့သတ္တိရှိရမယ်..မြန်မာပါ..ေ ပါ့.. စသဖြင့်..
အထူးသဖြင့်.. ကိုယ့်အချင်းချင်း.. မြန်မာလို့ မပြောကြတော့
အမေစု ပြောသလိုပါပဲ.. နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး ဘာလုပ်ရမလဲ.. ယူအက်ရောက်
အနော်ကတော့ မျက်ခြေမပြတ်နဲ့လို့ဆိုရာမှာ တဖက်မှာ တာဝန်တွေရှိတယ်..
မြန်မာအချင်းချင်းဝေးကွာမသွားဖို့ ညီညွတ်စွာနေဖို့ တာဝန်ပါ..
အနော်မြန်မာပါလို့ပြောပြီး မြန်မာအချင်းချင်း မဝေးကွားသွားစေချင်ပါ..
08-04-2011 06:17 AM
ဗမာပတ်စပို့ အနီရောင်လေးကိုင်ရတဲ့ ဒုက္ခက အနီးဆံးအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည် ယိုးဒယားလေဆိပ်ရောက်တာနဲ့ စတွေ့တော့တာပါပဲ။
ဗမာပတ်စပို့ ကိုနိုင်ငံကြီးတခုရဲ့ဗီဇာတုံးလေးနဲ့ ဆိုတာနဲ့ မယုံသင်္ကာမျက်လုံးတွေနဲ့ ၀ိုင်းပြီး စစ်တော့တာပါပဲ။
ကျွန်တော် ဂျပန်လ၀ကအချုပ်ထဲမှာ ဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာလေးရဖို့ စောင့်နေရတုံးကြုံဖူးတာကတော့
အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သံရုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ရတဲ့ထဲမှာ အမေရိကန်သုံးက အမြန်ဆုံးပါပဲ။
နေ့တိုင်းသံရုံးအရာရှိတစ်ယောက်က တိုကျိုလ၀ကအချုပ်ကိုလာပြီး သူတို့နိုင်ငံသားရောက်မရောက် လုပ်ပေးကိုင်ပေးစရာ ရှိမရှိ
နေ့တိုင်းလာစုံစမ်းပါတယ်။ ရှိခဲ့ရင် ချက်ချင်း လုပ်ပေးကိုင်ပေးစရာရှိတာကို လုပ်ပေးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် နေ့ချင်းပြီးပါတယ်။
ဂျပန်လိုတိုင်းပြည်မှာ လ၀ကအချုပ်ကို အမေရိကန်တစ်ယောက်ရောက်လာဖို့ အခြေအနေက အတော့်ကိုနဲတာပါ။
နောက်တခုကြုံခဲ့ရတာက ဖိလစ်ပိုင်မိသားစုတစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့ မင်းတို့က ကြာနေရတာလဲဆိုတော့ သံရုံးကနေတစ်ဆင့် သမ္မတဆီအသနားခံစာ
တင်ထားလို့ပါတဲ့။ နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ပြန်ဖို့တဲ့ပါတဲ့။ အဲဒါ လေယဉ်ရက်စောင့်နေတာပါတဲ့။
ဖိလစ်ပိုင်လေကြောင်းလိုင်း ချောင်တဲ့ရက်မှာမှ ပြန်လို့ရမှာမို့လို့ပါတဲ့။
ဗမာသံရုံးကတော့ ci (နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာ) လေးတောင်မှ .......
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ငယ်စဉ်အချိန်တုံးက ဗမာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်တုံးကတော့ ဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်၊ ကိုယ်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့တိုင်းပြည်၊ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့တိုင်းပြည်၊ တနေ့နေ့တချိန်ချိန်ကျရင်တော့
အတိုင်းအတာတခုထိ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှာပါဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့။
ခုချိန်မှာတော့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အဲဒီအချိန်က အဲဒီအခွင့်အရေးကိုအရမယူခဲ့တာ မှားများမှားသွားသလားဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပေါ့။
နောင်တရနေတာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်မျှော်လင့်ခဲ့သလို တိုးတက်မှုတွေက မဖြစ်လာပဲ တနေ့ထက်တနေ့ ပိုဆုတ်ယုတ်လာတဲ့
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ အမိတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီး စဉ်းစားမိတာလေးပါ။
ခုချိန်မှာ ဗမာနိုင်ငံသားအဖြစ်က စွန့်လွှတ်ရဖို့ အခွင့်အရေးထပ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ငယ်စဉ်တုံးကလောက်တော့
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ချစ်နိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။